Pastor Salaadda oo halis ah ma ahayn funny | Apg29
Wargayska ayaa maalin waxay ku sameeyeen madadaalo ah ee wadaad, kuwaas oo akhriyey telefoonka intuu tukanayay.
Maalinta iyo warbaahinta bulshada faafin galida mobile wadaad ee halka uu hogaaminayo shirka tukashada. Waxaan waxba ku saabsan qoray, maxaa yeelay, waxaan u maleeyey Wasiirka akhriyo laga yaabaa bönämne ah halka uu ku tukaday. Aad run. Maalinta qoray maqaal cusub:
- Waxaa jiray wasiirka ka Ohio oo naagtiisa leeyahay kansarka saaxiib, ayaa sheegay in Perry Stone.
- Waxaan ka soo gaaray my phone in isaga Messa.
Sidaas jawaabtiisa kuwa u maleeyeen in xaaladda ahaa qosol oo dhan waa in ay jirto wax qosol ah oo dhan la.
- Waxaad ka dhigay madadaalo aan kharashka loogu talagalay wadaad ah oo naagtiisa ku dhacay kansarka.
Wadaad The sharxayaa in a YouTube video cusub.
Mararka qaarkood waa in aan aad u ogaato wax på¨varför dhacaya oo aan ku booda gebagebada. Ma laga yaabaa in sida ay u muuqataa in ay.
Maalintii malaha waa in raali?
Mararka qaarkood waxaa dhacay in dad igu wareegsanaa ayaa weerarkiisii ​​kaliya aan u joogay in aan telefoonka gacanta. Waxaa dhacay labo jeer aan heli lahaa baabuur galay. Ka dibna waxaan aan la mobile surfed xataa ama eegay u galay. Waxa ay ahayd filan oo aan ku jiray in ka dibna ay soo gabagabeeyey in aan isticmaalaysa lahaa ama u daawadaan.
Wax kasta oo ay tahay, maxaa yeelay, Anigu garan maayo, laakiin waxaan ka shakisan tahay waxay ka masayro yihiin sababta oo ah goobta aan blog apg29. Intaa waxaa dheer in ay ku ekaadaan in dadka la xiriiri waan isticmaalaa telefoonka mobile si loo casriyeeyo oo shaqada on site blog aan. Mid ka mid ah markaas weydiistay raaligelin, kuwa kale oo aan.
Haddaba ma aad u baahan tahay masayr ah. Waxa kale oo aad bilaabi kartaa blog ah oo ku faafay injiilka ammaanta Ciise Masiix!